ပြန်ပါဦးမယ် ပြန်ဦးမယ် – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
← ကြည့်မိ၍ မြင်သည်၊ ကြည့်သော်လည်း မမြင်၊ မမြင်လို၍ မကြည့်?
3 thoughts on “ပြန်ပါဦးမယ် ပြန်ဦးမယ်”
ုkom | May 8, 2010 at 11:11 pm
ကုမ်ရာသီသူ | May 10, 2010 at 1:24 pm
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်မှာ အမဂွိ၊ တစ်ပတ်ပဲ ခွင့်ရမှာဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ တက်သုတ်ရိုက်ရမှာပဲ။ ဟူး………. မောတော့မောတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်………… မောတယ်။ 😀
ုkom | May 14, 2010 at 11:53 am
ဒီနေ့ ၁၄ ရက်…